IGUMBI LOKUFUNDA LWE-ANNA PNSION - I-Airbnb
IGUMBI LOKUFUNDA LWE-ANNA PNSION
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguAndreas
I-Anna Pension ikwilali yaseKarterados kwaye inikezela ngobubele obuthe cwaka kunye nosapho njengokungathi usekhaya, umgama nje oyi-1.5 km. ukusuka eFira eyinkunzi yeSantorini. I-Wi-Fi yasimahla ifumaneka kuyo yonke indawo. Zonke iiyunithi ezine-air-conditioner zixhotyiswe ngomabonakude, ifriji kunye noomatrasi bamathambo. Uninzi lunebalcony yabucala eneembono zolwandle okanye zegadi.
Igumbi linokusetyenziswa ngabantu be-3 ngeendleko ezongezelelweyo ze-10 € ngobusuku
Iindwendwe zoMhlalaphantsi ka-Anna zingonwabela ixesha lokuphumla ngakwidama lokuqubha lehotele kwaye zithathe ithuba lokufikelela kwi-intanethi yasimahla. Abasebenzi abanobubele banika iindwendwe ulwazi lwabakhenkethi. Umbindi obekwe eKarterados, iAnna Pension yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola isiqithi saseSantorini. Idolophu yaseFira eneendawo zokutyela, imivalo kunye neevenkile zikumgama wokuhamba we-Anna Pension
Khonza i-buffet ngexabiso le-euro ezi-7 ngomntu ngamnye.
Sinikezela ngesidlo sakusasa se-buffet esixabisa i-euro ezisi-7.
Igumbi linokusetyenziswa ng…
4.88 (iingxelo zokuhlola 160)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Karterados Santorini